သတင်း - Hydraulic Excavator Slewing Bearing ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။
Flange အမျိုးအစား Slewing Bearing
SE စီးရီး Slewing Drive
WEA စီးရီး Slewing Drive
Hydraulic Excavator Slewing Bearing ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။
ဟိုက်ဒရောလစ်တူးဖော်သူများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် single-row 4-point contact ball internal tooth slewing bearings ကိုအသုံးပြုသည်။excavator အလုပ်လုပ်နေချိန်တွင်၊ slewing bearing သည် axial force၊ radial force နှင့် tipping moment ကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသောဝန်များကို ထမ်းရပြီး ၎င်း၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ထိန်းသိမ်းမှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။Slewing ring ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရာတွင် အဓိကအားဖြင့် ချောဆီနှင့် ပြိုင်ကားလမ်းနှင့် အတွင်းဂီယာကွင်းတို့ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ အတွင်းနှင့် အပြင်ဆီ တံဆိပ်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် fastening bolts များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ယခု ကျွန်တော်သည် ကဏ္ဍခုနစ်ရပ်ကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမည်။
လျှောကြိုးကွင်း၏ လှိမ့်နေသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပြေးလမ်းများသည် အလွယ်တကူ ပျက်စီးပြီး ကျရှုံးကာ ကျရှုံးမှုနှုန်းမှာ အတော်လေး မြင့်မားသည်။excavator ကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း၊ ပြေးလမ်းတွင် အဆီထည့်ခြင်းသည် rolling element၊ raceway နှင့် spacer တို့တွင် ပွတ်တိုက်မှုနှင့် ဟောင်းနွမ်းမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ပြေးလမ်းအပေါက်သည် ကျဉ်းမြောင်းပြီး အဆီဖြည့်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်မြင့်မားသောကြောင့် လက်ဖြင့် ဆီဖြည့်ရန်အတွက် လက်စွဲသေနတ်များ လိုအပ်ပါသည်။
ပြေးလမ်းအတွင်း အဆီများဖြည့်သောအခါ၊ "static state refueling" နှင့် "single point refueling" ကဲ့သို့သော မကောင်းတဲ့ဖြည့်နည်းများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။အကြောင်းမှာ အထက်ဖော်ပြပါ ညံ့ဖျင်းသော ဖြည့်နည်းများသည် လျှောကြိုးကွင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆီ ယိုစိမ့်မှုနှင့် အမြဲတမ်း လျှောကြိုးကွင်းဆီ ဖျံများပင် ဖြစ်စေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု၊ အဆီဆုံးရှုံးမှု၊ အညစ်အကြေးများ ဝင်ရောက်မှုနှင့် ပြိုင်ကားလမ်းများ အရှိန်မြန်စေပါသည်။အချိန်မတန်မီ ချို့ယွင်းမှုမဖြစ်စေရန် အဆီအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို မရောစပ်မိစေရန် သတိထားပါ။
လျှပ်စီးကွင်း၏ ပြိုင်ကွင်းအတွင်းရှိ ဆိုးရွားစွာ ယိုယွင်းနေသော အဆီများကို အစားထိုးသည့်အခါ၊ လျှပ်စီးလက်စွပ်အား ဖြည်းညှင်းစွာနှင့် ညီညီညာညာ လှည့်ပတ်နေသင့်သည်၊ သို့မှသာ ဆီပြေးလမ်းတွင် ဆီများ ညီညီညာညာ ပြည့်လာစေရန်။ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို အလျင်စလိုမလုပ်နိုင်ပါ၊ အဆီ၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို အပြီးသတ်ရန် အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
2. ဂီယာကွက်လပ်ဧရိယာကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။
Slewing ring gear နှင့် slewing motor reducer ၏ pinion ၏ ချောဆီနှင့် ယိုယွင်းမှုကို သတိပြုရန် slewing platform ၏အောက်ခြေရှိ သတ္တုအဖုံးကိုဖွင့်ပါ။သတ္တုအဖုံးအောက်တွင် ရော်ဘာပြားကို ဘောင်းများဖြင့် ချိတ်ထားသင့်သည်။bolts များ ချောင်သွားပါက သို့မဟုတ် ရော်ဘာ gasket ချို့ယွင်းပါက၊ သတ္တုအဖုံးမှ ရေများသည် လှည့်နေသော ဂီယာ၏ ချောဆီအဖုံး (ဆီစုပုံထားသော ဒယ်အိုး) အတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အချိန်မတန်မီ ဆီချို့ယွင်းမှုနှင့် ချောဆီအကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျော့ကျစေပြီး ဂီယာယိုယွင်းမှု တိုးလာစေသည်။
အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပဆီတံဆိပ်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
တူးဖော်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း လျှောကြိုးကွင်း၏ အတွင်းနှင့် အပြင်ဆီ တံဆိပ်များ မပျက်မစီး ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ပျက်စီးသွားပါက အချိန်မီ ပြုပြင်ရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးရမည်။slewing motor reducer ၏ အလုံပိတ်ကွင်း ပျက်စီးပါက၊ reducer ၏ အတွင်းပိုင်း ဂီယာဆီသည် ring gear ၏ ချောဆီ အပေါက်ထဲသို့ ယိုစိမ့်စေပါသည်။Slewing ring ring gear နှင့် slewing motor reducer ၏ pinion gear ၏ meshing လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ ဆီနှင့် ဂီယာဆီသည် ရောနှောသွားမည်ဖြစ်ပြီး အပူချိန်တက်လာသောအခါ၊ ဆီသည် ပိုပါးလာကာ ပါးလွှာသော အဆီများကို အပေါ်ဘက်သို့ တွန်းပို့ပေးပါမည်။ အတွင်းဂီယာကွင်း၏ မျက်နှာပြင်အဆုံးသည် အတွင်းဆီတံဆိပ်မှတဆင့် ပြိုင်ကားလမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ကာ ပြင်ပဆီဆိယံမှ ဆီယိုစိမ့်ပြီး ယိုစိမ့်မှုဖြစ်စေကာ ဒြပ်စင်များ၊ ပြေးလမ်းများနှင့် အပြင်ဘက်ဆီ တံဆိပ်သည် ပျက်စီးမှုကို မြန်ဆန်စေသည်။
အချို့အော်ပရေတာများက slewing ring ၏ချောဆီစက်ဝန်းသည် boom နှင့် stick နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြပြီး နေ့တိုင်း ဆီထည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။တကယ်တော့ ဒီလိုလုပ်တာ မှားတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဆီများ မကြာခဏ ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းခြင်းသည် ပြေးလမ်းအတွင်း အဆီများလွန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး အတွင်းနှင့် အပြင်ဆီလွှာများတွင် အဆီများ ပြည့်လျှံစေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အညစ်အကြေးများသည် လှိမ့်နေသောဒြပ်စင်များနှင့် ပြေးလမ်း၏ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လျှောပြေးကွင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်သည်။
4. ချိတ်တံများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
Slewing ring ၏ 10% သော bolts များ ချောင်နေပါက၊ ကျန်သော bolts များသည် tensile နှင့် compressive loads တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင် ပိုမိုအားကောင်းလာမည်ဖြစ်ပါသည်။Loose bolts များသည် axial impact loads များကိုထုတ်လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လျော့ရဲမှုနှင့် bolts များပိုမိုချောင်သွားကာ bolt များကျိုးပဲ့သွားကာ ပျက်စီးမှုများနှင့် သေဆုံးမှုများပင်ဖြစ်စေသည်။ထို့ကြောင့်၊ ကြိုးကွင်း၏ပထမ 100h နှင့် 504h ပြီးနောက်၊ bolt pre-tightening torque ကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ထို့နောက် bolts များတွင် လုံလောက်သော pre-tightening force ရှိကြောင်းသေချာစေရန် အလုပ်ချိန် 1000 နာရီတိုင်း စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
bolt ကို ထပ်ခါတလဲလဲ အသုံးပြုပြီးနောက်၊ ၎င်း၏ ဆန့်နိုင်အား လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ပြန်လည်တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း torque သည် သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးနှင့် ကိုက်ညီသော်လည်း တင်းကြပ်ပြီးနောက် bolt ၏ ကြိုတင်တင်းကြပ်မှုအားလည်း လျော့သွားမည်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် bolts များကို ပြန်လည်တင်းကျပ်သည့်အခါ၊ torque သည် သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးထက် 30-50 N·m ပိုများသင့်သည်။Slewing bearing bolts များ၏ တင်းကျပ်မှု အစီအစဥ်အား 180° symmetrical direction ဖြင့် အကြိမ်များစွာ တင်းကျပ်သင့်သည်။နောက်ဆုံးအကြိမ် တင်းကျပ်သည့်အခါ၊ bolts အားလုံးသည် တူညီသော pretightening force ရှိသင့်သည်။
5. ဂီယာရှင်းလင်းမှုကို ချိန်ညှိခြင်း။
ဂီယာကွာဟချက်ကို ချိန်ညှိသည့်အခါ၊ slewing motor reducer နှင့် slewing platform တို့၏ ချိတ်ဆက်ထားသော bolts များ လျော့ရဲခြင်းရှိမရှိ စောင့်ကြည့်ရန်၊ ဂီယာ meshing gap သည် အလွန်ကြီးမားခြင်း သို့မဟုတ် သေးငယ်လွန်းခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် သတိပြုပါ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရှင်းလင်းချက်သည် အလွန်ကြီးမားပါက၊ တူးဖော်မှု စတင်ချိန်နှင့် ရပ်သွားသည့်အခါ ဂီယာများအပေါ် သက်ရောက်မှု ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆူညံသံများ ကျရောက်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ရှင်းလင်းချက်အလွန်သေးငယ်ပါက၊ ၎င်းသည် slewing ring နှင့် slewing motor reducer pinion ကိုယိုယွင်းစေသည်၊ သို့မဟုတ်သွားများကျိုးသည်အထိဖြစ်လိမ့်မည်။
ချိန်ညှိသည့်အခါ၊ swing motor နှင့် swing platform အကြား positioning pin သည် ချောင်နေသလားဆိုတာကို အာရုံစိုက်ပါ။positioning pin နှင့် pin hole သည် interference fit တစ်ခုဖြစ်သည်။positioning pin သည် positioning အတွက်သာမကဘဲ rotary motor reducer ၏ bolt တင်းကြပ်မှုကို တိုးမြင့်စေပြီး rotary motor reducer ၏ လျော့ရဲနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသောပိတ်ဆို့ခြင်း၏တည်နေရာပြ pin ချောင်သွားသည်နှင့်၊ ၎င်းသည်ပိတ်ဆို့ခြင်းနေရာပြောင်းခြင်းကိုဖြစ်စေပြီးပိတ်ဆို့ခြင်းအပိုင်းတွင်ပြေးလမ်းကိုပြောင်းလဲစေသည်။လှိမ့်နေသောဒြပ်စင်သည် ရွေ့လျားသောအခါ၊ ၎င်းသည် ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် တိုက်မိပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆူညံသံကို ဖြစ်စေသည်။တူးဖော်အသုံးပြုသည့်အခါတွင် အော်ပရေတာသည် ပိတ်ဆို့နေသော ရွှံ့များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် ဂရုပြုကာ ပိတ်ဆို့သွားခြင်း ရှိ၊ မရှိ သတိပြုသင့်သည်။
လျှောကျနေသော ဝက်ဝံများကို ရေဖြင့် ဆေးကြောရန် တားမြစ်ပါ။
slewing bearing မှ ရေ၊ အညစ်အကြေးများနှင့် ဖုန်မှုန့်များကို slewing ring raceway အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် ၊ ပြေးလမ်း၏ သံချေးတက်ခြင်းနှင့် သံချေးတက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေကာ အဆီများ ပျော့သွားကာ ချောဆီ အခြေအနေကို ပျက်ပြားစေကာ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် တားမြစ်ထားသည်။ အဆီ၏;ဆီတံဆိပ်ချေးမဖြစ်စေရန်အတွက် slewing ring oil seal နှင့် ထိတွေ့သည့် မည်သည့် solvent ကိုမဆို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၊ တူးဖော်ခြင်းအား အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အသုံးပြုပြီးနောက်၊ ၎င်း၏ slewing bearing သည် ဆူညံသံနှင့် ထိခိုက်မှုကဲ့သို့သော ချွတ်ယွင်းမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။အော်ပရေတာသည် ချွတ်ယွင်းချက်အား ဖယ်ရှားရန် အချိန်မီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် ဂရုပြုသင့်သည်။ကြိုးကွင်း၏ မှန်ကန်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှသာလျှင် ၎င်း၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်၊ ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အပြည့်အဝ ပေးနိုင်ပြီး ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါသည်။
© မူပိုင်ခွင့် 20102020 : All Rights Reserved.